ကျနော်နဲ့ ဟိုကလေးမ…(ဇာတ်သိမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျနော်နဲ့ ဟိုကလေးမ…(ဇာတ်သိမ်း)
Posted by နောင် ရိုး on Aug 19, 2014 in Arts & Humanities, History | 43 comments
ကျနော် ဆူးလေဘက်နိုတြီပြန်တဲ့ကိစ္စနဲ့လာရင်း အိန္ဒိယသံရုံးကိုလာတဲ့ မိန်းတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်တယ်….။ မိန်းနဲ့ သူ့မန်နေဂျာမမပါ…။ အဲ့ဒီမမကြီးနဲ့လဲ ကျနော်ခင်နေလေတော့…မိန်းတို့ ၂ ယောက်ကို မုန့်ကျွေး၊ စကားပြောနဲ့… သူတို့လဲပြန်မယ်လုပ်ရော…သူတို့ရုံးကားက စက်နှိုးမရတော့….။
ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်လဲပျော်ရွှင်စွာ အကျိုးဆောင်လေသတည်းပေါ့……။
ကန်တော်ကြီးဘက်ကပတ်ပြီး သူတို့ရုံးရှိတဲ့ ပွင့်သစ်စမ်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုးက ရုံးကိုရောက်ဖို့နည်းနည်းအလို….လမ်းညာဘက်အခြမ်း လမ်းကြားကျဉ်းလေးထဲမှာ…မော်တော်ပီကယ်တစ်ယောက်…ပလပ်စတစ်ခုံလေးနဲ့ ဂျာနယ်ဖတ်ရင်း…ထိုင်နေတယ်ခင်ဗျ…(ခုတော့ အဲ့လူရှိမရှိ မသိတော့ပါ..)။ မိန်းက အဲ့ဒီလူကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာအမြဲတွေ့ပုံရပါတယ်….၊ သူ့ဂျာမမကို လှမ်းပြောတယ်…။
“အဲ့ဒီပီကယ် အဲ့မှာ အမြဲထိုင်နေရတယ်….၊ သူ မိုးများရွာရင်…ဘယ်နားကိုပြေးမလဲမသိဘူးနော်….” တဲ့…
မိန်းစကားကြောင့် သူမရဲ့ ဂျာမမလဲ တစ်ချက်တော့ တွေသွားတယ်….။ ပြီးမှ…သတိဝင်လာပြီး မိန်းကို လှမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့် ကျနော်ကားမောင်းနေရင်း ပြုံးမိပါတယ်…။
“ မိန်း…နင်ဟာလေ….သူများအပူ ကိုယ့်အပူတော်တော်လုပ်တယ်…” တဲ့…
မိန်းဟာ…သူများအပူ ကိုယ့်အပူတော်တော်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေးပါ….။ (တစ်ခါတစ်လေ…သူ့အပူလုပ်တာ…ကျနော့်အပူပါ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်…)
ဒါအချစ်လို့ခေါ်သလား အော်နေတဲ့ဖုန်းသံကြောင့် မိန်းမှန်းကျနော်သိလိုက်ပြီ…….
“နောင်ရိုး….မ၀ါတို့လင်မယားကို ပိုက်ဆံ ငါးသောင်းချေးလိုက်ပါဟယ်…။ သူတို့မပေးလဲ လကုန် ငါပြန်ပေးပါ့မယ်..” ဟိုဘက်က မိန်းအသံအတော်တိုးတိုးမို့ သေချာနားစိုက်ထောင်ရတယ်….။ ဖုန်းခိုးပြောနေတယ်ထင်ပါရဲ့……..
“အဆင်မပြေဘူး…၊ သူတို့ကလေးလဲ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်…ငါ့ရှေ့မှာလာညည်းတော့…ငါလဲ ပိုက်ဆံအဆင်သင့်မရှိတာနဲ့ အမေပေးထားတဲ့ လက်စွပ်နဲ့ဆွဲကြိုး ထုတ်ပေးလိုက်တယ်…”
“ဟေ….အဲ့ဒါတွေ အခု ဘယ်မှာတုန်း..”
“သူတို့…သွားပေါင်တယ်လေ….မနက်က အမေမေးလို့..ငါ့မှာ မရှိတဲ့ပစ္စည်းပျောက်သယောင်ရှာပြရ၊ တစ်ဖက်က မ၀ါဆီဖုန်းခိုးဆက်ရနဲ့….”
“အဲ့ဒီတော့…သူတို့ရွေးပြီး ခုနက ပြန်လာပေးတယ်….။ ညနေပြန်လာယူမှာ…၊ ဒါပေမယ့် အမေက သိမ်းသွားတော့ ငါပြန်ပေးလို့မရတော့ဘူး….။ အဲ့ဒါ ငါ့ကိုယ်စား မ၀ါတို့ကို ပိုက်ဆံငါးသောင်းသွားပေးလိုက်ပါဟယ်….”
မိန်းတစ်ယောက် တစ်ဖက်ကလဲ…ထမင်းပေါင်းစားရင်း…တစ်ဖက်ကလဲ ကျနော် Expire မကြည့်ဘဲဝယ်လာမိတဲ့မုန့်ထုပ်ကို ကိုင်ရင်း..ပလုပ်ပလောင်းနဲ့ ပွစိပွစိ ရွတ်နေပါတယ်…။
“နင်ဟာလေ…ငါဘယ်လောက်ပြောပြော ဂရုမစိုက်ဘူး…။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ရောဂါကို ၀ယ်ချင်နေတယ်….။ ဒီ expire လေးကြည့်လိုက်တော့ နင် ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ…..။ အဲ့ဒီမှိုတွေက ဘာဖြစ်မှာလဲ … နင်သိလား…။ ကင်ဆာဟဲ့…ကင်ဆာ…
နင်သာ ကင်ဆာဖြစ်ရင်လေ…နင့်ကိုမွေးထားတဲ့မိဘတွေ ဘယ်လောက်ရင်ကျိုးရမလဲ…သိလား…၊ သေသွားတောင် ရုပ်ထွက်လှမယ်မထင်နဲ့…နင့်ဗိုက်ထဲ အဲ့မှိုတွေဘယ်လောက်ရောက်သွားပလဲတောင် မသိပါဘူး….။ ဘယ်တော့မှ………. ”
ပြန်တက်ရတော့မယ် နောက်သင်တန်းတစ်ချိန်အမှီ…နေ့လည်စာလဲစားရင်း….ကျနော့်ကို မပြောလိုက်ရမှာလဲစိုးလို့…ပလုတ်ပလောင်းကြားထဲက ရအောင်ပြောနေတဲ့ မိန်းကိုကြည့်ပြီး…ကျနော်..ရီချင်နေတယ်….
ဖြစ်မှာပဲလေ…………။ မနေ့က ကျနော်တို့ Dota ပြိုင်ဆော့တာမှာ သူမရှုံးခဲ့တာကိုးးးးး
ခပ်မြင့်မြင်စည်းထားတဲ့ ဆံပင်တွေကြောင့် သူမမျက်နှာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလေးက အထင်းသား ပေါ်နေတယ်…။ ကျနော်သဘောကျတဲ့….သူမပါးက သွေးကြောလေးတွေရယ်…၊ နားသယ်စပ်က ဆံပင်နုလေးတွေရယ်….
“ ငါ့ အိမ်ရှင်မလေးသာ ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ…..”
အဲ့ဒီအတွေးဝင်လာတဲ့အချိန်…ကျနော် ကြက်သီးဖြန်းကနဲ ထပါတယ်..။
“မိန်း…ငါ..နင့်ကို အရမ်းးးးချစ်တယ်….” ကြိုတင်မပြင်ဆင်ဘဲ ကျနော်…ပြောလိုက်တာပါ…..။ အဲ့ဒီအချိန်…ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်သွားတယ်…..။ ကျနော့်ရင်ခုန်သံကို ကျနော်…ပြန်ကြားနေရပါတယ်…..။
ငါဘာလို့ ဒီလောက် Romance မဆန်ရတာလဲ……
မိန်း…စားလက်စ ထမင်းပေါင်း ရပ်သွားတယ်….။ ကိုင်ထားတဲ့ ဇွန်းခရင်းကို ခပ်ဖြေးဖြေးချတယ်…..။
ပြီး….သူ့မျက်နှာလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးကြည့်နေတဲ့….ကျနော့်မျက်လုံးကို …သေချာစိုက်ကြည့်ပြီး…စကားတစ်ခွန်းပြောပါတယ်…။ မျက်တောင်တချက်မခတ်ဘဲ၊ အားနာသမှုမရှိဘဲ သူမပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားက….
“ ငါ….နင့်ကို … လုံးဝ မချစ်ဘူး……..”တဲ့
အဲ့ဒီကလေးမ အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်ဟာ…ကျနော့်ညတွေကို တော်တော်ကြာအောင်ထိ ခြောက်ချားစေခဲ့တယ်….။
ရက်တွေကြာလာတော့ ကျနော်ပြန် အားတင်းကြည့်တယ်…..။ မိန်းမှာ….ငါကလွဲပြီး ရွေးလောက်စရာ…ဘယ်သူများရှိနေသေးလို့လဲ…….။ တစ်ချိန်တော့ ငါ့ဆီစိတ်ပြန်လည်လာလိမ့်မယ်…..
ဒါပေမယ့်….အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျနော်ထင်တာ….တက်တက်စင်လွဲခဲ့ကြောင်း ရင်နာနာနဲ့ပဲ လက်ခံခဲ့ရတယ်…..။
ဟိုတစ်လောက မုန်တိုင်းစဲလို့ ပိုလှနေတဲ့ကောင်းကင်တစ်ခုကို ကျနော်မြင်တယ်…..။ သူမမှာ…ချစ်တဲ့သူ ရှိနေပြီတဲ့…….။ အဲ့ဒီစကားက ကျနော့်ရင်ကို ကျိုးစေတယ်……။
သူမ ဒီလောက်ခင်ခဲ့သိခဲ့တဲ့ ကျနော့်ကို ခပ်ခွာခွာစ လုပ်တယ်….။ သူမနှစ်တိုင်းတက်နေကျ ကျနော့်မွေးနေ့ဟာ… လက်ဆောင်တစ်ခု လူကြုံပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်…..။ ကျနော် ဘယ်လောက်ရင်နာမယ်ဆိုတာ…..သိသိချည်းနဲ့ ….သူမချစ်သူကို သစ္စာရှိဖို့အတွက်….၊ သူမကိုယ်သူမ လိပ်ပြာလုံဖို့အတွက်…..ကျနော်တစ်ယောက် ဘေးရောက်သွားခဲ့ပြီ……….။
အဲ့ဒီလောက်တောင်….ချစ်ပေးခဲ့ရအောင်…..အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလူမျိုးမို့လို့လဲ………..ကျနော့်ထက်ပဲ ဘာတွေသာလို့လဲ….၊ ကျနော့်ထက်ပဲ…သူမကို ပိုချစ်ပေးနိုင်သေးတာလား………
သူမရဲ့ စိတ်လေးနဲ့……သူမများ…ထိခိုက်သွားမလားဆိုတာ….ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်ထက် ပိုစိုးရိမ်နေတယ်……
ဒါနဲ့………သူမမှာ…ချစ်သူရှိကြောင်း….ကျနော့်ကို အသိပေးခဲ့တဲ့..ပထမဆုံးစကားတစ်ခွန်း….ခင်ဗျားတို့ကို ပြောပြမယ်….
“ငါ့ကမ္ဘာမှာ…..လတစ်စင်း သာတယ်….” တဲ့
(နင့်ကိုယ်နင် ထိချင်ထိ၊ ငါ့ကိုလဲ ထိလို့ရသေးတယ်….၊ Third Person ကိုတော့ လုံးဝမထိနဲ့…ဆိုတဲ့ သူမစကားကြောင့် ကျနော့် ပိုစ့်တွေကို ဒီမှာတင် ရပ်ပါတယ်…)
အရေးအသားအရ နေနော်၊ မောင်လှမျိုး နေခဲ့တော့ပဲ။
စိတ်ခံစားချက်ပါ ပါတဲ့ အတွက် အဲဒီ ခံစားချက်က ဖတ်တဲ့သူကိုပါ ကူးတယ်။
ဒီ စာဖတ်ရင်းသိလိုက်တာတော့ ညည်းက စိတ်ထားရော၊ ညာဏ်ရည်ရော မြင့်တဲ့ထဲ ပါမှာပါ။
နည်းနည်းတော့ ရင့်ကျက်မှု နည်းပြီး ကလေးဆန်သလားတော့ မပြောတတ်။ (I m not so sure)
အချစ်ချင်းမညီရင် ပေါင်းရတောင်မှ မကြာတတ်ပါဘူးး
မရတဲ့ အချစ်တွေက ပို ချစ်လို့ ကောင်းပါတယ်။
ရပြီးရင် ထင်သလောက် မဖြစ်တဲ့ အချစ်တွေ ဒုနဲ့ဒေးမို့ပါ။
အချစ်ကို စစ်စစ်လေးပဲ ဖြစ်စေချင်ရင် အပိုင် မယူချင်တာ ကောင်းပါတယ်။
အရင်ဆုံး….အတည်မန့်ပေးထားတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ မဇီဇီ
ကျနော်…အပိုင်မယူချင်ပါဘူးဗျာ…..။ ၀န်ခံရရင် လိုတော့ လိုချင်တာပေါ့လေ…။
သနားတတ်တယ်…၊ အားငယ်တယ်..၊ ကူညီချင်စိတ်လေးရှိတယ်…၊ တခါတလေ ကလေးဆန်တယ်…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…ခု သူ့ကောင်လေးအတွက်..သူ ပြတ်သားစွာ…ကျနော့်ကို ပုန်ကန်နေပါတယ်…။
“မရတဲ့ အချစ်တွေက ပို ချစ်လို့ ကောင်းပါတယ်။”
အရသာတော့ အ၀င်ဆိုးလိမ့်မယ် ထင်တယ်ဗျာ…
ကလေးမ ကို မင်း သိသလောက် နားလည်သလောက် …
တတိယ လူက မသိနိုင်ဘူးးး…
ဘေးလူ အနေနဲ့တော့ သေချာတယ်။
Self-centered person တွေဟာ သူများ စိတ်ကို နားလည်ဖို့ သိပ်မကြိုးစားကြပဲ မသိလိုက် မသိဖာသာ နေတတ်ပြီး သူတို့ မုဒ် အတိုင်း ပဲ လုပ်တတ်တယ်။
ကောင်မလေးက ပဲ နားလည်ပေးရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
နာ့ အထင် သက်သက်ပါ။
မြင်ရသလောက် ကလေးမရဲ့ ပါစင်နယ်လတီက သူ့ကို နားလည်တဲ့ လူမျိုးကို မလိုပဲ….
သူက နားလည်ပေးချင်တဲ့ စိတ်မျိုးလည်း ရှိပုံပဲ။
လတစ်စင်းမဟုတ်ဘဲ နေတစ်စင်း ဖြစ်နေတာ ကျနော် သိပါတယ်…
ခင်ညာ့ ဆေးထိုးချက်က 9လောက်ရှိပါတယ်…ဒေါ်ဇီဇီဇော်…
ဒါကို သိသိချည်းနဲ့ ခင်ညာ့မို့ ကျော့်ကို ရက်ရက်စက်စက် ပြောထွက်ရက်တယ်…ဘာတဲ့…။
နောက်ပြီး…သိမယ်မှန်းသိသိချည်းနဲ့ Privacy တစ်ခု ပြောရဦးမယ်….(နောက်ခါမှ ဆဲစေသတည်း…)
နွေးထွေးမှု၊ ဂရုစိုက်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ သူ့ဖြစ်တည်နေမှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း…ဒါတွေကို မိသားစုဆီမှာ မရခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီကလေးမ…အဲ့ဒီအရာတွေကို တခြားသူတွေထက် ၂ဆ ပိုလိုချင်တယ်…။
“မြင်ရသလောက် ကလေးမရဲ့ ပါစင်နယ်လတီက သူ့ကို နားလည်တဲ့ လူမျိုးကို မလိုပဲ….
သူက နားလည်ပေးချင်တဲ့ စိတ်မျိုးလည်း ရှိပုံပဲ။”
ဘာလို့အဲ့ဒီလို ထင်လဲ..ကျနော် သိပါတယ်….သူ့အပေါ်ကောင်းတဲ့ ကျနော့်ကို ပစ်ခွာလို့ပဲ…။ ဒါပေမယ့်…သူမအမှန်တရားထဲမှာ..(မိုက်မဲစွာ..) အချစ်က လိုကိုလိုလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…။
နားလည်ပေးချင်တဲ့ စိတ်မျိုးရှိတာမဟုတ်၊ နားလည်ပေးလိုက်ရတာက ပိုဖြစ်ဖို့များပါလိမ့်မယ်….
ဟုတ်တယ် ။ အရေးအသား ရှယ်ဘဲ ။
ကိုယ့်​​ရှေ့မှာအဲ့​လောက်​ရှုပ်​ပြ​နေတာကို ဘယ်​သူကများလက်​ခံမှာပါလိမ့်​။ :-D. ​စာ​ရေးဆြာ လုပ်​ပါလား။ ဖတ်​လို့​တော်​​တော်​​ကောင်းတယ်​။
တော်ရုံမြှောက်ပါ…(အူးလေးလား…အားဂျီးမားလား…စစ်စတာလားမသိ) Iris ရယ်…။
ကျနော်စာအုပ်ထုတ်ရင် ကျနော့်မိဘကိုမွဲဆေးဖော်နေသလိုဖြစ်မယ် ထင်လို့…….ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေနေတယ်…
အဲ့ဒီလောက်တောင်….ချစ်ပေးခဲ့ရအောင်…..အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလူမျိုးမို့လို့လဲ………..ကျနော့်ထက်ပဲ ဘာတွေသာလို့လဲ….၊ ကျနော့်ထက်ပဲ…သူမကို ပိုချစ်ပေးနိုင်သေးတာလား…
အချစ်ဆိုတာ တကယ်စစ်မှန်နက်ရှိုင်းသွားရင် ပိုင်ဆိုင်ရမှမဟုတ်ပါဘူး ….
( ကချင်လေယာဉ်မယ် အထွားကြီးလက်ကလေးကို ကိုင်ရင်း မန့်သည် ) …နောက်တာ အတည် အာဟိ
“အချစ်ဆိုတာ တကယ်စစ်မှန်နက်ရှိုင်းသွားရင် ပိုင်ဆိုင်ရမှမဟုတ်ပါဘူး …. ”
ပိုင်ဆိုင်ဖို့ထက် သူမ ပျော်ရွှင်နေဖို့ကိုသာ ပိုလိုလားပါတယ်…ကချင်လေယာဉ်မယ် အထွားကြီးလက်ကလေးကို ကိုင်ရင်း မန့်သည့် ကိုဆောရိုးခင်ဗျား…
ယောက်ျားပီသလိုက်တဲ့ ကောင်လေးနှယ့်… နံရိုးရှင်အစစ်အမှန်နဲ့တွေ့ပြီး အနာဂါတ်မှာ အောင်မြင်တဲ့မိသားစုဘ၀တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါစေကြောင်း
ပေးတဲ့ဆုတောင်း ပြည့်စေကြောင်းပါ ကိုဆောရိုးခင်ဗျား…။ ကိုဆောရိုးလဲ ကချင်လေယာဉ်မယ်လေးလက်ကိုတွဲပြီး…အမြန်ဆုံး ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေကြောင်းပါ…
“ငါ့ကမ္ဘာမှာ…..လတစ်စင်း သာတယ်….”ဆိုတာ ဘယ်သူများ ဖြစ်နေမလဲ
ဟုတ်​ပ ခရစ်​ ကျမ လည်း အဲ့လို​ပြောချင်​​နေတာ။ အားနာလို့။ ဟီး
ကျော့်မျက်ရက်ဒွေကို သူရို့ ၂ယောက် ချူယူနေကြဒယ်…
ပြောရရင်တော့ မင်း သူ စစ်ခဲ့တဲ့ စာမေးပွဲ ကျ ခဲ့တာ။
ပြောရရင်တော့ ကျတာတောင် နဲ သေး။
အပေါ်မှာ အိုင်းရစ် ပြောသလိုဘဲ သူ စပ်ပေးတိုင်း လိုက်ကြိုက် နေမှတော့ အယုံအကြည် ရှိစရာ လား နောင်ရိုး ရယ်။
မင်း သာ သူ့ ကို တကယ်ချစ်တာဆိုရင် သူ မဟုတ် တဲ့ မိန်းကလေး တွေ ကို ဘေးမှာ ထားလိုက်ဖို့ မသင့်ဘူး၊
WELL DONE ပါ။ ;-))
ကျလိုက် တဲ့ စာမေးပွဲ ကို သင်ခန်းစာယူလိုက်နိုင်ရင် နောက် စာမေးပွဲ တစ်ခု ကို ဂုဏ်ထူးမှတ် နဲ့ အောင်မှာပါ။
အဲ့ ဘရုတ်လေး ကို မရ လိုက်တာ နဲ့ ဘယ်မိန်းမ ကိုမှ မယူတော့ဘူး ဆိုတဲ့ “အခိုင်အမာ သံဓိဌာန် မရှိ” ခဲ့ရင်ပေါ့။
သို့ပေမဲ့ “အခိုင်အမာ သံဓိဌာန် ရှိ” မယ်လို့ … အဲဂလိုတော့
Bye now. :-)))
မြင်သလောက် က ဂလိုပဲ ဖြစ်နေတာကိုးးးးးး
(ကိုယ်တွေ့ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာလို့ အပေါ်ကပြောတဲ့အတိုင်း)
အချစ် ဆိုတာ တစ်ကြိမ်တည်းပွင့်တဲ့ ပန်း မဟုတ်ပါဘူး လို့
(ညံ့လိုက်တာ လို့ ပြောမလို့ပေမင့် အပေါ်မှာ ပြောထားကြပြီဆိုတော့ မပြောတော့ဘူးလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ)
ခေါင်းထဲမှာ ရှိသမျှ ဒဿနတွေ ထုတ်ပြလိုက်ရင် ငုတ်တုတ်မေ့သွားမယ် သိလား
နတ်သမီး လစ်မစ် ပြည့်နေလို့ ဒီအတိုင်း ထိုင်နေတာ ငွင်းငွင်း
သီဝရီနဲ့ ဒသန နဲ့တင် ခြေချုပ်မိပြီး ဘာမှ လှုပ်မရတဲ့ လူမျိုး ဆိုတာ။
မမြင်ဖူးရင် ကြည့်ထားပါ အရပ်ဂဒို့!!!
ဒီ သိကြားကို အထင်သေးတယ်ပေါ့လေ……
ဖွ လိုက်ရ မကောင်း ရှိတော့မယ် ဂါးးး
အေးပါဗျာ..ခင်ဗျားပဲ ပြောပါ ကိုမာဃ
ပြောချင်တာ မန့် ချင်တာတွေကတော့ အပေါ်ကလူတွေပြောသွားမန့် သွားကြပီ..
အချစ်ဆိုတာ…..အဲ အီး ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ….
အဲ…အီး မသိပေမယ့်…ကိုညိုဝင်းတော့ သိကိုသိရမယ်….
ဟယ်.. နာမည်ကိုက နောင်ရိုးဘဲဥစ္စာ…
အဲ နောင်ထပ် ဖောင်တစ်ခု ပြောင်းလို့ ပြောမလို့ဘာာာ
ညည်း ကျုပ်ဖောင်ကိုတော့ လာမထိနဲ့….
ပြီးရင် ပြန်လာမယ်ပြောပြီး ဒီဂလောက်နဲ့တော့ မလုပ်သွားဘာနဲ့
ကောမန့်တွေ ဖတ်မိတော့လဲ ဒီ အဆွေး ဇာတ်သိမ်း က ဟာသ ဝတ္ထု လိုလို ကို ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲကလား ဟရို့….
ဟုတ်ပဗျာ ကိုနောင်ရိုးကြီး ခညား ညံ့ထှာ…
သူ စပ်ပေးသမျှ တွေကို ရ အောင် လိုက်ပြီးတော့မှ နင့်ကို ချစ်လွန် လွန်းးးးးး လို့ ကျန်တဲ့ ဇာတ်ရှုပ်တွေကို ငါ ဖြတ်ခဲ့ ပါပြီဟယ်… ဆိုရင် ပွဲသိမ်း ပွဲသိမ်း..
(မိန်း က ရော ကျန်တဲ့ ဇာတ်ရှုပ်တွေက ရော ပါးဝိုင်းချ မှာကို ပြောတာ…)
ကျနော်..အစပိုင်း ပြောခဲ့ပါတယ်…။ သိခဲ့တာ သုံးနှစ်ကျော်လို့…
ကျော်သူ့ကို စောင့်ခဲ့တာ ၂ နှစ်ခဗျ..၊ တခြားမိန်းခလေးတွေဟာ ကျော့်အတွက်ဘာမှကို မဟုတ်တာ….။
ဒါကို သူလဲ သိတယ်..
သူသာ ခေါင်းညိမ့်၊ ကျော့်မိဘတွေ က, ပြီးတောင် ပေးစားဦးမယ်
ကိုယ်ပေးသောလည်း ပေးတိုင်း ပြန်မရတာ …..လို့ ခေါ်မလား …. ခ်ခ်
Happy Ending လည်းဟုတ်ပု…
ကိုနောင်ရိုးရဲ့  အကြင်နာတွေသာ မှန်ခဲ့ရင်လေ တစ်ချိန်မှာ ပြန်ဆုံခွင့်(ချစ်သူတွေဖြစ်ခွင့်) ရှိပါစေရို့ ….
မြတ်ပုလဲလေး သဘောဖြူ ပြီး ဆုတောင်းတာ သိပါ့ဗျာ….
သို့သော်….တစ်စုံတစ်ယောက် (သို့) နှစ်စုံနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြိတ်ဆဲခြင်း မခံရဖို့တော့ ကျော်ကလဲ ဆုတောင်းမိပါရဲ့…
ဒီအပိုင်းက ပို ခံစားလို့ အကောင်းဆုံးပဲ
ရိုမန်းတစ်မဆန်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ရိုမန်းတစ်ဆန်ဆန် ရေးထားတာ
အချစ် နဲ့ အချစ်ရဲ့ ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတွေ
အများကြီး ဆက် တွေးတော ခံစားလိုက်မိသေးတယ်
သာတဲ့လရောင်အောက်မှာ ဂီတာလွယ်ကာ အလွမ်းတေးဆိုနေတတ်သူတွေလည်း ရှိနေမြဲပါလား။
မင်းရဲ့ Post စကာတင်ထဲ ပါလာ တယ်။
နောင် အခါ သူကြီး ဖြတ်ချင် ဖြတ်လို့ ရအောင်
Point တစ်ထောင်တော့ ပြည့်အောင်စုပေးဦး။